ညီလင်းသစ်: ဥရောပရဲ့ တံခါးဝမှာ...
Posted by ညီလင်းသစ် au 3.11.14
အပိုလိုနတ်ဘုရားကျောင်းကို သေသေချာချာကို ကြည့်သွားတယ်
သြော် တူရကီ တူရကီ
အပေါ်က ညီ့လိုပဲ အပိုလိုနတ်ဘုရားကျောင်းကို အကြာကြီး ကြည့်သွားတယ်။
အင်း...အကိုပြောတဲ့ တူရကီအဖြစ်က ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းက ဒွန်းညက်စ်မြို့မှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပေမယ့် အနောက်ခြမ်းက L'viv မြို့မှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ ကျင်းပနေသလိုမျိုးနော်။
ဒီတစ်ခါ သားသားပုံ မပါပါလား အကိုရဲ့။
P.S. တူရကီသွားမှန်းသိရင် ကီးချိန်းလေး မှာလိုက်ပါတယ်။ :D
အဲဒီမှာလည်း ပြဇာတ်ရုံပျက်ကြီးတွေ ရှိတာပဲနော်...
အပိုလို ကျောင်းကို အပိုအလို မရှိအောင် ကြည့်သွားတာလား? :D
အင်း… ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးမှာ တဂျိန်းဂျိန်း ချနေကြတော့ အဲဒီလိုမှ မပျော်ကြရင်လည်း မဖြစ်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့လေ၊ သားသားပုံကတော့ ဘာမှ အထွေအထူး မရှိတာနဲ့ မတင်ဖြစ်တာပါ၊ နောက်တခေါက် ထပ်သွားဖြစ်ရင် ကီးချိန်း မှာလိုက်လေ…၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ရောမတွေက ရောက်လေရာရာမှာ ခမ်းခမ်းနားနား ဆောက်လုပ်နေထိုင် ခဲ့ကြပုံပါပဲ…။
ကိုညီလင်းရေ........ဂျက်နဲ့ဖောင့်မတူလို့ထင်တယ် စာတွေဖတ်နရဘူး ကွတ်မက်ဖွင့်တော့မှ ဖတ်ရတယ် ကွန်မက်တွေလိုက်ဖတ်ပြီးပုံတွေပြန်ကြည့်ခဲ့တာပေါ့ -----သိပြီ
မနှစ်က တီတင့်အမျိုးသား တူရကီကိုတာဝန်နဲ့ သွားပြီးအပြန်မှာ တူရကီအကြောင်းမေးတော့ Istanbul အကြောင်းနဲ့တစ်ခြား အကြောင်းအရာလေးတွေပဲ ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ရင်း ကြားခဲ့ရတယ်။ ဒီကနေ့ မောင်ညီလင်းရဲ့ Side နဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစုံလင်လင်လေး သိခွင့်ရသွားတယ်။
မောင်ညီလင်းရဲ့ စည်းစနစ်ကျ သေသပ်ပုံတော့ ပို့စ်တိုင်းလိုလိုပြောမိတယ် 'ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ကျနော်တို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ၊ သွားမယ့်မြို့၊ နိုင်ငံ စတာတွေဖြည့်ပြီး ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်' လေးဖတ်ပြီး သဘောကျလို့ပါ။
Dear Ko Nyi Linn Thit,
I'masilent reader of your posts. Actually, thanking you that you post all the categories with excellent photos and writings. I getalot of knowledge from your posts.
Looking forward to read your coming posts.
ဟုတ်ပါ့။ သဲတွေက မြန်မာပြည်လောက်တောင် မဖြုဘူး။ ဒါပေမယ့် ဥရောပ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေ ရှိတော့ သွားရတာ တန်တယ်။ မြေထဲပင်လယ်ဆိုတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားဖူးသလို ပေါလောပေါ်လား?
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ရတာ ကိုညီလင်းနဲ့ အတူ တူရကီက မြို့ကလေးကို ရောက်သွားသလိုပါပဲ။
ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်လိုက် စာဖတ်လိုက်နဲ့ ဘေးနားမှာ ကိုညီလင်းက လိုက်ရှင်းပြနေသလိုပဲ။
တပုဒ်လုံးလဲ ဖတ်ပြီးရော ….
အနည်များများ ပါတဲ့ တူရကီ ကော်ဖီကို သောက်ရင်း ကဇာတ်ရုံမှာ ပြဇာတ်ထိုင်ကြည့်ချင်တယ်။
တူရကီ ကမ်းခြေမှာ အပမ်းဖြေရင်း ပေမီဒေါက်မီ … အေးအေးလေးကိုလဲ မြည်းစမ်းချင်တယ်။
အသက်ကြီးလာလို့ အချိုတွေ တဝစားပြီး ရာကီလေးနဲ့ အစာပိတ် ခံတွင်းရှင်းချင်တယ်။ 
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကိုညီလင်းကို အားကျလို့ …. ချိုမြိန်သာယာစွာ ပျင်းရိချင်မိပါရဲ့ ရှင် … ။
ကျနော့်ဖောင့်က ဟိုးအရင်အတိုင်း ဇော်ဂျီပါပဲ၊ ဘာကြောင့်များ မစံပယ်က ဖတ်မရတာပါလိမ့်? ကွန်ပြူတာမှာ ဖောင့်အသစ်များ ထပ်ထည့်လိုက်တာလား…? အဆင်ပြေပါစေဗျာ..၊
ဒါဆိုရင် လောလောဆယ် မပျင်းမရိ အလုပ်,လုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့လေ…၊း))
IS ကောင်တွေက အင်အားကောင်းနေလို့ မသွားခင်တုန်းက နည်းနည်းစိုးရိမ်ပြီး လိုအပ်မယ်ထင်တာ လုပ်ခဲ့တဲ့ သဘောပါ တီတင့်ရာ၊ ဒီလောက်လည်း စနစ်တကျ မဟုတ်ရပါဘူး၊း)
Ma Thazin Phoo,
Thank you so much for your kind comment! Well.. having written that comment, you are notasilent reader anymore, huh. :D Anyhow, your words encourage me and please do come and read whenever you have some spare time!
ပင်လယ်သေလောက် လွယ်လွယ်ကူကူ မပေါ်ပေမယ့် ရေထဲမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေး ပက်လက်အိပ်နေလိုက်ရင်တော့ အကြာကြီး ပေါ်တယ်ဗျ…၊း)
ဒါဆို ဘလော့ဂ်ပေါ်ကနေ ဧည့်လမ်းညွှန် အလုပ်ကို ဆက်လုပ်လို့ ရနေသေးတဲ့ သဘောပေါ့နော်၊း) တခါတလေမှာ လူဟာ တပတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ပျင်ရိခွင့်တော့ ရှိသင့်တယ်လို့ ကျနော်တော့ ယူဆတာပဲ မမေရေ…။
မောင်ညီလင်းမှာ စာဖတ်ပရိသတ်တစ်ယောက်တိုးပြီ :)
မနေ့ညက တီတင့်အမျိုးသားပြန်လာတော့ တူရကီအကြောင်းပြောရင်း မောင်ညီလင်းရဲ့ Side အကြောင်းကို ပြောပြလိုက်တော့ သူဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ မောင်ညီလင်းဘလော့ထဲဝင်ပေးလိုက်တယ်။ အပုဒ်အတော်များများဖတ်သွားပြီး ချီးကျူးနေတယ်။ သူကဖတ်ခဲပေခြင်း တီတင့်ပို့စ်တွေတောင် အားလုံးဖတ်တာမဟုတ်ဘူး ... :)
Thanks for your prompt reply. I'm also an old student of BEHS (2), Mayangone. I always visit your blog whenever I have time. Like you said, I'm notasilent reader anymore. :)
ဟုတ်…၊ ခုလို မိတ်ဆက်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျ၊ စိတ်ဝင်တစား လာဖတ်တဲ့ အန်ကယ့်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်-လို့…၊း)
Oh really? You're also an alumna from BEHS (2) Mayangone? I am from 92 batch and happy to know about it. :) Thanks again for your visit!
မှန်တယ်အစ်ကို အသက်ကြီးလာလို့ အချိုကြိုက်လာကြတာ...ညီမလဲအချိုအရမ်းကြိုက်လာလို့ သတိထားလျှော့ရတယ် အဖေ့အမျိုးတွေက အားလုံးဆီးချိုနဲ့လေ..။ ပို့စ်တွေမတက်တာကြာပြီဆို ခရီးသွားနေတာကိုးး... အစ်ကို့ခရီးသွားပို့စ်တွေကတော့ ပုံတွေနဲ့တင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီးသား..း)
အင်း... ညီမက အခုလို confirm လုပ်လိုက်တော့ တခုခုဆို ငါအသက်ကြီးနေပြီဆိုပြီး ဆင်ခြင်လို့ ရတာပေါ့လေ...။း)
ကျေးဇူးပါ ညီမရေ...၊ သတိတရနဲ့ ကွန်မန့်လေးတွေ ချန်ခဲ့လို့လည်း ဝမ်းသာတယ်...၊း)
အဆင်ပြေရင် သွားသာသွားဗျို့...၊ ကလေးတွေ သဘောကျမှာ သေချာတယ်..။
We are waiting for your post. Love it. Especially your photo and travel post are my favourite.
i always interesting reading your post..thank you so much..i hope i ll visit to side , may be one day..
As usual, nice post!!